Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China Mirror Aluminium Chenyu
A na -emecha enyo enyo dị elu site na anodic oxidation nke aluminom. Ọ na -eme ka elu aluminom na -enwu dị ka enyo. A na -ejikọ akwa abụọ nke aluminom na -adịgide adịgide na polyethylene nke dị n'ime ya, nke kpuchie ya na agba na -eme ka elu ahụ dị larịị ma sie ike nke ukwuu. Otu isi ihe dị mkpa bụ na ọ bụ naanị n'ihu panel ka ejiri PE ma ọ bụ PVDF (Polyester) tee ka e nwee ike nye enyo yiri ya nke mara mma nke ukwuu.
1. A na -ama ogwe ihe mejupụtara enyo enyo nke ọma maka njirimara ha dị ka ezigbo ihe mkpuchi ọkụ, mkpuchi ụda, ike & ịdịte aka, ịdị larịị na ịdị larịị.
2. Tinyere atụmatụ ndị a ihe kacha mkpa nke enyo enyo kpuchie bụ nke na -eguzogide ihu igwe.
3. Ogwe ndị a kpuchiri enyo na -egosi nhọrọ dịgasị iche iche nwere atụmatụ na -agbanwe agbanwe. 4.Otu n'ime nnukwu uru nke enyo enyo bụ eziokwu na ha bụ ndị enyi na gburugburu ebe obibi ma na -enye anyị ohere ịnụ ụtọ flair nwere enyo yana njiri mara mma nke na -eme ka anyị tụkwasị ngwaahịa a obi.
1) Mgbidi mgbochi mpụta mpụga, a na -eji Ogwe Mgbidi eme ihe ngosi, ụlọ ahịa, ọfịs, ụlọ akụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, ụlọ nri na ụlọ;
2) Ndozigharị eji achọ mma maka ụlọ ochie agbakwunyere, facades, elu ụlọ;
3) mma n'ime ụlọ maka mgbidi ime ụlọ, uko ụlọ, ime ụlọ ịsa ahụ, kichin, mbara ihu na ụzọ ụgbọ oloko;
4) bọọdụ mgbasa ozi, ihe ngosi, bọọdụ mkpọsa na bọọdụ;
5) Wallboard na uko ụlọ maka tunnels;
6) Ngwa ndị dị na ebumnuche ụlọ ọrụ;
7) Ihe eji ahụ ozu, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri
1. Usoro nke ịme enyo ACP panel bụ usoro nrụpụta nke na -eji akwụkwọ aja eme ihe ugboro ugboro iji kpochapụ efere aluminom, a na -ekewa usoro ahụ ụzọ atọ: degrease, igwe igwe aja na asacha.
2. N'oge usoro nrụpụta enyo ACP, teknụzụ akpụkpọ ahụ pụrụ iche mgbe a gwọchara anodes nwere ike ime elu nke efere aluminom iji mepụta akwa akpụkpọ anụ nke nwere akụkụ ọla.
3. Mgbe nke ahụ gasị, enwere ike ịhụ obere eriri ọ bụla dị n'elu ya nke ọma, elu igwe ahụ ga -enwukwa nke ọma dị gịrịgịrị.
nkwa ngwaahịa mma
1) N'okpuru ọnọdụ ihu igwe nkịtị, agba dị n'elu agaghị agbapụ, ọnya, mgbawa, ma ọ bụ ntụ.
2) N'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi nkịtị, enweghị peeling ma ọ bụ afụ nke mpempe akwụkwọ ahụ ga -eme.
3) Mgbe ekpughere efere ahụ na radieshon ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ nkịtị, ọ nweghị ihe mgbawa chromatic na -adịghị ahụkebe ga -eme.
4) Nyochaa ụzọ nyocha dị ka ụkpụrụ mba ụwa siri dị, ihe ngosi niile na -emezu ihe achọrọ maka ụkpụrụ mba.
5) A na-emepụta ogwe mgbidi Fluorocarbon dị na ọkọlọtọ mba nke aluminom-plastik mejupụtara GB/T17748-1999.
Nke gara aga: Art na -eche ihu ogwe ihe mejupụtara aluminom
Osote: Mkpuchi mkpuchi aluminom